ညရောက်တာနဲ့ကိုယ်ထင်ပြတဲ့ သရဲဖြစ်သွားတဲ့ ဘုန်ကြီး ဦးနန္ဒ (ဖြစ်ရပ်မှန်) -
ညရောက်တာနဲ့ကိုယ်ထင်ပြတဲ့ သရဲဖြစ်သွားတဲ့ ဘုန်ကြီး ဦးနန္ဒ (ဖြစ်ရပ်မှန်)
Category : ဆောင်းပါးကဏ္ဍ
ပေါက်ခေါင်းမြို့နယ် ရွာတစ်ရွာက စာတတ်ပေတတ် ဘုန်းကြီး ဦးနန္ဒ တဲ့ အသံကောင်း။ အပြောကောင်း။ အဟောကောင်း ဓမ္မကထိက တစ်ပါးဖြစ်လို့ ပေါက်ခေါင်းမြို့နယ်တဝိုက်သာရေး၊ နာရေး ကိစ္စတွေမှာ ပွဲတိုင်းကျော် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ပစ္စည်းလေးပါးပေါများရုံမကပဲ ဝတ္ထုကြေးငွေများပါ စုမိလာတော့ ဦးနန္ဒ တစ်ပါး သူခိုး ဓါးပြ ရန်ကိုကြောက်လာပါတယ်။
ဒါနဲ့ပဲ သပိတ်ကြီးတစ်လုံးမှာ ဝတ္ထုငွေတွေ အပြည့်ထည့်ပြီး သူ့ကျောင်းလှေခါးအောက်မှာ မြေကျင်းတူးပြီးမြုပ်ထားလိုက်ပါတယ်။ သူခိုး ဓါးပြထက် နှစ်ဆဆိုးတဲ့ လောဘဆိုတဲ့ တရားဆိုးကြီး သူ့သန္တာန်မှာရောက်လာပြီ ဆိုတာ သူ့ခမျာ မသိရှာဘူး။
တနေ့ အသက်လေးဆယ်ကျော်မှာပဲ ဟောပြောရလွန်းလို့ ဖြစ်လာတဲ့လေနာရောဂါနဲ့ပဲ ပျံလွန်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ရဟန်းတော်တစ်ပါးဖြစ်တဲ့အတွက် ပုံမှန်အတိုင်းဆိုရင် အထက် နတ်ဘုံကို ပျံတော်မူရမှာပါ။အခုတော့ လှေကားအောက်မှာ မြုပ်ထားတဲ့ ငွေသပိတ်အပေါ် စွဲလမ်းတဲ့ လောဘကြောင့် ကျောင်းဝိုင်းထဲမှာပဲ သံပရာခွံဦးထုပ်ဖြူဆောင်းရတဲ့ ဘုန်းကြီးတစ္ဆေသွားဖြစ်ပါတယ်။
စာတတ်ပေတတ် ဘုန်းကြီးဘဝက လာတာဆိုတော့ ငွေသပိတ်ကိုစွဲလမ်းတဲ့လောဘကြောင့် အခုလိုဘဝရောက်ရတယ် ဆိုတာသေချာသိတယ်။ ဒါကြောင့် သူ့ကျွတ်လမ်း လွတ်လမ်းကိုရှာတဲ့အနေနဲ့ နောက်တက်တဲ့ ကျောင်းထိုင်ဘုန်းကြီးကို ကိုယ်ထင်ပြပြီးအကူအညီတောင်းဖို့ ကြိုးစားတယ်။
ဒါပေမယ့် နောက်တက်တဲ့ကျောင်းထိုင်ဘုန်းကြီးတွေက ကြောက်တတ်သူတွေဆိုတော့ သရဲခြောက်တယ်ဆိုပြီး ထွက်ထွက်ပြေးကြတာနဲ့ သူ့ဆန္ဒမပြည့်ဝခဲ့ဘူး။
ဒီလိုနဲ့ နှစ်အတန်ကြာတော့ သတ္တိရှိတဲ့ဒကာတစ်ယောက် ဦးနန္ဒ ကျောင်းကို ရောက်လာပါတယ်။လာတာက သူ့ငယ်ချင်းအိမ်ကိုလာတာပါ။သူငယ်ချင်းမရှိပဲ ဇနီးသည်တစ်ယောက်ပဲရှိတဲ့အိမ်မှာ ညအိပ်ရမှာ မသင့်တော်လို့ ဦးနန္ဒကျောင်းကိုလာအိပ်ခြင်းပါပဲ။
ညရောက်တာနဲ့ ကိုယ်ထင်ပြတဲ့ ဦးနန္ဒကို ဒကာက သတ္တိကောင်းသူဆိုတော့ ဘာမပြောညာမပြော ချက်ချင်းထပြီး နပန်းလုံးတယ်။ ပြီးတော့ သရဲခေါင်းမှာဆောင်းထားတဲ့ ဦးထုပ်ဖြူကို ဖြုတ်ယူမိသွားတာနဲ့ သရဲဟာ အားအင်ကုန်ခမ်းပြီး ကြမ်းပြင်ပေါ်ပုံကျသွားတယ်။
အဲ့ဒီ အခါကျမှ ဦးနန္ဒ တစ်ဖြစ်လဲ သရဲက ဒကာတော် သတ္တိကောင်းတဲ့သူနဲ့ တွေ့ရလို့ အားရဝမ်းသာဖြစ်ရပါတယ်။ငါဟာ ဒီကျောင်းက ပျံလွန်တော်မူသွားခဲ့တဲ့ ကျောင်းထိုင်ဘုန်းကြီးပါ။လှေကားအောက်မှာမြုပ်ထားတဲ့ ငွေသပိတ်ကိုစွဲခဲ့လို့မကျွတ်မလွတ်ဖြစ်နေရတာပါ။ဒကာ ငါ့ကိုကူညီပါ။
အဲဒီ ငွေသပိတ်ကိုဖေါ်ယူပြီးသံဃာတွေပင့်ဆွမ်းတွေ သင်္ဃန်းတွေလှူပြီးကျွန်ုပ်ကို အမျှပေးပါ။ကျန်တာကို ဒကာသုံးပါလို့ ပြောတဲ့အတွက် ဒကာကလည်း ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ပေးတယ်။ အဲ့ဒီတော့မှ သရဲဘဝက လွတ်သွားခဲ့ရပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းကတော့ ဒါပါပဲ မေတ္တာရှင်(ရွှေပြည်သာ)ရဲ့ အသေမြတ်ချင် သေနည်းသင် စာအုပ်က ထုတ်ယူဖေါ်ပြတာပါ။
ဘုန်းကြီးကလည်း လောဘနဲ့ သေတယ်။ ဒိဌိလည်း မပယ်ရသေးတော့ ငါစွဲ စွဲပြီးသေလို့ သရဲဖြစ်တာပါ။ တကယ်ပယ်ရ သတ်ရမှာက ဒိဌိ ဖြစ်ပါတယ်။
ဓါတ်တော်ကျသွားပြီဖြစ်တဲ့ မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ တရားတော်တွေမှာလည်း ဟောကြားထားပါတယ်။တခြားသော ဆရာတော်များလည်း သစ္စာတရားဟောရင် ဒီတိုင်းဟောပါတယ်။သစ္စာ တကယ်သိဖို့ဆိုတာ အရင်ဆုံး သောတာပန်တည်ပြီး ဒိဌိဖြုတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဝီစိကိစ္ဆာက သူ့အလိုလိုသေသွားရော။
နာမ်နဲ့ ရုပ်ပဲရှိတယ်။ ငါဆိုတာမရှိဘူး။ ပုဂ္ဂိုလ် သတ္တဝါ မရှိဘူး။ယောက်ျား မိန်းမ မရှိဘူးဆိုတာ ကွဲကွဲပြားပြားဖြစ်သွားတဲ့ အရိယာမှာ ငါဆိုတဲ့ သက္ကာယဒိဌိ မရှိတော့လို့ လောဘဖြစ်ပေမယ့် အစွဲမရှိဘူး။ဒိဌိ ဦးဆောင်ခြင်း မရှိတော့ဘူး။
သမီးတော် တရားစခန်း ဝင်စဉ်က ဦးပဇင်း ဦးဣဿရိယက ပလ္လင်ပေါ်ကနေမေးဖူးပါတယ်။ဘုန်းကြီးနဲ့လူ ဘယ်သူက ပိုပြီး လောဘ ကြီးသလဲတဲ့။အောက်ကသံဃာတော်တွေက ဖြေမဖြေတော့မသိဘူး။အမျိုးသားရော အမျိုးသမီးယောဂီတွေရော ဝိုင်းပြီးအော်ကြတာ။
ဘုန်းကြီး အဲ့လိုဝိုင်းအော်တော့ ဦးပဇင်း မျက်လုံးပြူးသွားတယ်။ဟမ် တဲ့ ဆက်လည်းပြောပါတယ်။ဘုန်းကြီးလောဘအနန္တ တဲ့။ဒါပေမယ့် လူတွေရဲ့ လောဘကတော့ ဘုရားတောင် ခြေရောလက်ရော မြောက်ထားရလောက်အောင်ကြီးတယ်တဲ့။ အသောမသတ်နိုင်ကြပုံများ ပြောပါတယ်။
သို့သော် အရိယာဖြစ်သွားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်တော့ လောဘကို လောဘမှန်းသိတဲ့အတွက် အစွဲအလမ်းမဖြစ်ပါဘူး။ဘုန်းကြီးဦးနန္ဒ ကတော့ အစွဲအလမ်းကြောင့် သရဲဖြစ်တယ်လို့ သက်သေပြသွားခဲ့ပါပြီ။စွဲစွဲလမ်းလမ်းဖြစ်စေတဲ့ ဒိဌိ ကို ပယ်သတ်ကြပါလို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေ။
Credit : တတိယမြောက်သမီးတော် ဆိုဒ်မှ တစ်ဆင့်မျှဝေသည်။
Credit: manawmaya journal
ညရောကျတာနဲ့ကိုယျထငျပွတဲ့ သရဲဖွဈသှားတဲ့ ဘုနျကွီး ဦးနန်ဒ (ဖွဈရပျမှနျ)
တနေ့ အသကျလေးဆယျကြျောမှာပဲ ဟောပွောရလှနျးလို့ ဖွဈလာတဲ့လနောရောဂါနဲ့ပဲ ပြံလှနျတျောမူခဲ့ပါတယျ။ရဟနျးတျောတဈပါးဖွဈတဲ့အတှကျ ပုံမှနျအတိုငျးဆိုရငျ အထကျ နတျဘုံကို ပြံတျောမူရမှာပါ။အခုတော့ လှကေားအောကျမှာ မွုပျထားတဲ့ ငှသေပိတျအပျေါ စှဲလမျးတဲ့ လောဘကွောငျ့ ကြောငျးဝိုငျးထဲမှာပဲ သံပရာခှံဦးထုပျဖွူဆောငျးရတဲ့ ဘုနျးကွီးတစ်ဆသှေားဖွဈပါတယျ။
စာတတျပတေတျ ဘုနျးကွီးဘဝက လာတာဆိုတော့ ငှသေပိတျကိုစှဲလမျးတဲ့လောဘကွောငျ့ အခုလိုဘဝရောကျရတယျ ဆိုတာသခြောသိတယျ။ ဒါကွောငျ့ သူ့ကြှတျလမျး လှတျလမျးကိုရှာတဲ့အနနေဲ့ နောကျတကျတဲ့ ကြောငျးထိုငျဘုနျးကွီးကို ကိုယျထငျပွပွီးအကူအညီတောငျးဖို့ ကွိုးစားတယျ။
ဒါပမေယျ့ နောကျတကျတဲ့ကြောငျးထိုငျဘုနျးကွီးတှကေ ကွောကျတတျသူတှဆေိုတော့ သရဲခွောကျတယျဆိုပွီး ထှကျထှကျပွေးကွတာနဲ့ သူ့ဆန်ဒမပွညျ့ဝခဲ့ဘူး။
ဒီလိုနဲ့ နှဈအတနျကွာတော့ သတ်တိရှိတဲ့ဒကာတဈယောကျ ဦးနန်ဒ ကြောငျးကို ရောကျလာပါတယျ။လာတာက သူ့ငယျခငျြးအိမျကိုလာတာပါ။သူငယျခငျြးမရှိပဲ ဇနီးသညျတဈယောကျပဲရှိတဲ့အိမျမှာ ညအိပျရမှာ မသငျ့တျောလို့ ဦးနန်ဒကြောငျးကိုလာအိပျခွငျးပါပဲ။
အဲ့ဒီ အခါကမြှ ဦးနန်ဒ တဈဖွဈလဲ သရဲက ဒကာတျော သတ်တိကောငျးတဲ့သူနဲ့ တှရေ့လို့ အားရဝမျးသာဖွဈရပါတယျ။ငါဟာ ဒီကြောငျးက ပြံလှနျတျောမူသှားခဲ့တဲ့ ကြောငျးထိုငျဘုနျးကွီးပါ။လှကေားအောကျမှာမွုပျထားတဲ့ ငှသေပိတျကိုစှဲခဲ့လို့မကြှတျမလှတျဖွဈနရေတာပါ။ဒကာ ငါ့ကိုကူညီပါ။
အဲဒီ ငှသေပိတျကိုဖျေါယူပွီးသံဃာတှပေငျ့ဆှမျးတှေ သင်ျဃနျးတှလှေူပွီးကြှနျုပျကို အမြှပေးပါ။ကနျြတာကို ဒကာသုံးပါလို့ ပွောတဲ့အတှကျ ဒကာကလညျး ပွောတဲ့အတိုငျးလုပျပေးတယျ။ အဲ့ဒီတော့မှ သရဲဘဝက လှတျသှားခဲ့ရပါတယျ။
ဇာတျလမျးကတော့ ဒါပါပဲ မတ်ေတာရှငျ(ရှပွေညျသာ)ရဲ့ အသမွေတျခငျြ သနေညျးသငျ စာအုပျက ထုတျယူဖျေါပွတာပါ။
ဘုနျးကွီးကလညျး လောဘနဲ့ သတေယျ။ ဒိဌိလညျး မပယျရသေးတော့ ငါစှဲ စှဲပွီးသလေို့ သရဲဖွဈတာပါ။ တကယျပယျရ သတျရမှာက ဒိဌိ ဖွဈပါတယျ။
ဓါတျတျောကသြှားပွီဖွဈတဲ့ မိုးကုတျဆရာတျောဘုရားကွီးရဲ့ တရားတျောတှမှောလညျး ဟောကွားထားပါတယျ။တခွားသော ဆရာတျောမြားလညျး သစ်စာတရားဟောရငျ ဒီတိုငျးဟောပါတယျ။သစ်စာ တကယျသိဖို့ဆိုတာ အရငျဆုံး သောတာပနျတညျပွီး ဒိဌိဖွုတျဖို့ဖွဈပါတယျ။ ဝီစိကိစ်ဆာက သူ့အလိုလိုသသှေားရော။
နာမျနဲ့ ရုပျပဲရှိတယျ။ ငါဆိုတာမရှိဘူး။ ပုဂ်ဂိုလျ သတ်တဝါ မရှိဘူး။ယောကျြား မိနျးမ မရှိဘူးဆိုတာ ကှဲကှဲပွားပွားဖွဈသှားတဲ့ အရိယာမှာ ငါဆိုတဲ့ သက်ကာယဒိဌိ မရှိတော့လို့ လောဘဖွဈပမေယျ့ အစှဲမရှိဘူး။ဒိဌိ ဦးဆောငျခွငျး မရှိတော့ဘူး။
သမီးတျော တရားစခနျး ဝငျစဉျက ဦးပဇငျး ဦးဣဿရိယက ပလ်လငျပျေါကနမေေးဖူးပါတယျ။ဘုနျးကွီးနဲ့လူ ဘယျသူက ပိုပွီး လောဘ ကွီးသလဲတဲ့။အောကျကသံဃာတျောတှကေ ဖွမေဖွတေော့မသိဘူး။အမြိုးသားရော အမြိုးသမီးယောဂီတှရေော ဝိုငျးပွီးအျောကွတာ။
ဘုနျးကွီး အဲ့လိုဝိုငျးအျောတော့ ဦးပဇငျး မကျြလုံးပွူးသှားတယျ။ဟမျ တဲ့ ဆကျလညျးပွောပါတယျ။ဘုနျးကွီးလောဘအနန်တ တဲ့။ဒါပမေယျ့ လူတှရေဲ့ လောဘကတော့ ဘုရားတောငျ ခွရေောလကျရော မွောကျထားရလောကျအောငျကွီးတယျတဲ့။ အသောမသတျနိုငျကွပုံမြား ပွောပါတယျ။
သို့သျော အရိယာဖွဈသှားတဲ့ ပုဂ်ဂိုလျတှအေတှကျတော့ လောဘကို လောဘမှနျးသိတဲ့အတှကျ အစှဲအလမျးမဖွဈပါဘူး။ဘုနျးကွီးဦးနန်ဒ ကတော့ အစှဲအလမျးကွောငျ့ သရဲဖွဈတယျလို့ သကျသပွေသှားခဲ့ပါပွီ။စှဲစှဲလမျးလမျးဖွဈစတေဲ့ ဒိဌိ ကို ပယျသတျကွပါလို့ တိုကျတှနျးလိုကျပါရစေ။
Credit : တတိယမွောကျသမီးတျော ဆိုဒျမှ တဈဆငျ့မြှဝသေညျ။
“စိတ်ခိုင်လို့ မငိုမိအောင် ထိန်းနိုင်ရင် ဖတ်ကြည့်ပါ..
“စိတ်ခိုင်လို့ မငိုမိအောင် ထိန်းနိုင်ရင် ဖတ်ကြည့်ပါ.. သူနဲ့ ကျွန်မ စတင်သိခဲ့တာက… (facebook) မှာ သူနဲ့ကျွန်မက သူငယ်ချင်းတွေပေါ့…… ကျွန်မ သူ့ကို သတိထားမိတာက သူကအသည်းကွဲ ကဗျာတွေ စာတွေ ရေးလေ့ရှိတဲ့ သူမို့ပါ။ သူကလူထူးဆန်းလေး တစ်ယောက်ပေါ့ အချစ်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ကြောက်လန့် နာကျင်နေတဲ့ မယုံကြည်တဲ့ လူတစ်ယောက်လို သူ့အချစ်ကြောင်းတွေကို (status)တင်လေ့ ရှိတယ်။ ကျွန်မ သူ့ကိုဘယ်ဘဝက ရေစက်ကြောင့်မှန်မသိဘူး စိတ်ထဲက သနားမိ သံယောဇဉ်ဖြစ်မိနေတယ်။ ကျွန်မ တနေ့ တနေ့ သူ့ (wall)ထဲ ဘယ်နခါမှန်မသိ ဝင်ကြည့်မိတယ်။သူကတော့ သတိမထားမိဘူးလေ။ တနေ့မှာ ကျွန်မအရဲစွန့်ပြီး (messenger)က စကားသွားပြောခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်ကစလို့ ကျွန်မသူ့အကြောင်းတွေ …
“ကိုယ်တန်ဖိုးထား မြတ်နိုးတဲ့အရာကပဲ ကိုယ့်ကို ဒုက္ခပြန်ပေးတတ်တယ်”
“ကိုယ်တန်ဖိုးထား မြတ်နိုးတဲ့အရာကပဲ ကိုယ့်ကို ဒုက္ခပြန်ပေးတတ်တယ်” တကယ်လို့သာ…… ၁။ တကယ်လို့ မင်း နှစ်သက်တဲ့ လူတစ်ယောက်ကို မက်ဆေ့ခ်ျပို့လို့ တော်တော်ကြာကြာ စောင့်ပြီး ပြန်မလာဘူးဆိုရင် … ထပ်မပို့ပါနဲ့တော့… သူ မင်းကို ဂရုမစိုက်လို့ပါ…. အပင်ပန်းခံပြီး မစောင့်ပါနဲ့တော့…..။ ၂။ တကယ်လို့ တစ်ယောက်တည်း ၀မ်းနည်းတဲ့အခါ… အခန်းထောင့် တစ်နေရာ (သို့မဟုတ်) အိပ်ရာထဲမှာလှဲပြီး ငိုချလိုက်ပါ… ကိုယ်ချင်းစာ သနားပေးမဲ့သူကို လိုက်မရှာနေပါနဲ့…. ငိုပြီးတာနဲ့ ပျော်ရွှင်စွာ အသက်ဆက်ရှင်ပါ…..။ ၃။ တကယ်လို့ လူတစ်ယောက်က တဖြည်းဖြည်းနဲ့ မင်းကို ဥပက္ခာပြု လျစ်လျူရှုလာတယ်ဆိုရင်…သူနဲ့ ခွဲခွာဖို့ ပြင်ဆင်ပါ….။ မင်းကိုနားမလည်တဲ့ လူတစ်ယောက်ဟာ မင်းနဲ့ မလိုက်ဖက်ပါဘူး….။ ကိုယ်တန်ဖိုးထား …
Total Users : 395856
Total views : 1428071